Expandable akpa House Manufacturers & Suppliers - China Expandable akpa House Factory
Expandable Container House Kit Prefab Home Okomoko maka Ibi
1.Expandable Container ụlọ Expandable akpa ụlọ nwere ike ịmegharị ugboro ugboro, nke ka mkpa bụ, nnukwu ohere maka obibi obibi. A na-eme ya mgbe gbasaa, nha bụ ihe dị ka 37 nke ụlọ anyị a ma ama, mita mita, nke bụ ihe dị ka 2.5 nke ejiri oge nchara welded nke emechiri emechi. Ejiri windo na windo a gwara mmanụ mechie ọnụ ụzọ ya na ogwe ya. Anyị na-enye azịza dị iche iche: ejikere nke ọma, ọ bụ igwe eji eme ihe maka ndị ahịa. O nwere ike ịbụ ihe efu n'ime, ụlọ ezumike, ...
China prefab modular homes house porta cabin casa, australia 20ft na 40 ft foldable expandable akpa ụlọ maka ire
1.Expandable Container house 1) Enwere ike iji ya dị ka ụlọ obibi, ụlọ ọgwụ na-adịru nwa oge, ụlọ mposi, ọfịs, ụlọ nchekwa, wdg. 2) Enwere ike itinye ya n'ime obere oge, gbakọtara site na mkpọchi na oke ike. 3) Enwere ike iji ya mee ihe ugboro ugboro na oge ndụ karịa afọ 15. 4) Site na usoro ejiri emechi emechi na nke kwesiri ntukwasi obi, ihe na-egbochi mmiri, na-eguzogide oku, mmiri na-egbochi ya na mgbochi corrosive. 5) Site n ’ụlọ ọrụ na-akwado nkwado dịka ebe ịsa ahụ, igwe ịsa ahụ, ntụ oyi, oghere, were gabazie. Nhọrọ Dị Mkpa Dị ...
New Portable 20ft prefab expandable obere akpa ụlọ (Bathroom, kichin) prefab ụlọ maka ahịa
1.Expandable Container House Item 20ft / 40 ft expandable container house, ngwa ngwa ụlọ ụlọ Steelgwè Ogwe 2.5-3.0 mm ogidi na ogwe igweColor na-achakarị ọcha, agba RAL ọzọ dị. Wall / Roof panel 50/75 mm EPS / ajị anụ / PU sandwich panel Floor Mgo board + PVC floor with color with to go to Window Window glazed abụọ, windo ijiji anaghị akwụ ụgwọ bụ ọnụ ụzọ Titanium magnesium alloy door / door wood / PVC sliding door Ụlọ ịwụ ịsa, nọ ọdụ T ...